Appalachian माउन्टेन्स: तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज हामी एक धेरै उत्सुक र उल्लेखनीय भूविज्ञान विषयको साथ आएका छौं। यसको बारेमा कुरा गरौं अपलाचियन पर्वतहरू। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण हिमाल श्रृंखला हो जुन उत्तरी क्यारोलिना र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचमा अवस्थित छ। अ in्ग्रेजीमा यसको नाम अपलाचियन माउन्टेनस् हो र यो पहाडको दायरा हो जुन ठूलो भू-भौगोलिक र भू-भौमिकीय मूल्यको साथ हो। यसमा धेरै प्रणालीहरू छन् जुन चुचुराहरूसँग छ जुन समुद्र सतहबाट १००० मिटर माथि छ।
के तपाईं अप्लाचियन पर्वतहरूको बारेमा सबै सबै महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू र रहस्य जान्न चाहनुहुन्छ? यस पोष्टमा तपाईले सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ 🙂
2 Appalachian अर्थव्यवस्था
3 भूविज्ञान, वनस्पति र जीव जन्तु
4 विशेष ठाउँहरू
यद्यपि यसका सबै चुचुराहरू समुद्री सतहबाट करिब १,००० मिटर माथि छन्, त्यहाँ एउटा चोटी छ जुन अरू सबै भन्दा माथि छ। यो माउन्ट मिशेलको बारेमा हो र उत्तर क्यारोलाइनामा अवस्थित छ। यो मापन २,० meters। मिटर र सबै उत्तरी अमेरिकामा सब भन्दा उच्च बिन्दु हो।
यसको उत्पत्ति पेन्जियाको गठनको क्रममा पालेओजोइक युगको अन्तमा भयो। Pangea महामहाद्वीप बाहेक अरु केहि छैन जुन ग्रह पृथ्वीमा गठन भएको थियो र जुन त्यतिबेला सम्म त्यस समयको लगभग सम्पूर्ण पृथ्वीको सतह थियो। यो धन्यवाद ज्ञात छ महाद्वीप बहाव सिद्धान्त de अल्फ्रेड Wegener.
उत्तर अमेरिका त्यसबेला युरोप र उत्तर अफ्रिकासँग जोडिएको हुनाले, अपलाचियनहरू भएको पर्वत श्रृंखला कुन पहाड श्रृंखलाको भाग थियो आजकल स्पेनमा यसलाई लास भिलुक्रस भनेर चिनिन्छ र मोरक्कोको एटलस।
समय बित्दै जाँदा र महाद्वीपहरू पानगियाको फुटेको ठाउँ पछि सर्दा यो पनि भाँचियो र यसले वर्तमान पर्वतमाला पनि निर्माण ग formed्यो। यो अविश्वसनीय देखिन्छ कि तीन भिन्न महाद्वीपमा हाल समान विशेषताहरूको साथ पहाड श्रृंखला रहेको छ, जब महामहाद्वीप पंगेयाले सम्पूर्ण पृथ्वीको सतह एकजुट गरेको थियो।
यो हिमाली दायरा महान प्राकृतिक स्रोतहरूको नायक हो र त्यसैले समाजका लागि आर्थिक स्रोतहरूको। यी एन्थ्रेसाइट कोइला र बिटुमिनस कोइलाको ठूलो भण्डारहरू हुन्। पेन्सिल्भेनियाका नागरिकहरू कोइलाको उत्खनन र शोषणको जिम्मामा छन्। क्षेत्रहरु मैरील्याण्ड, ओहायो, केन्टकी र भर्जिनिया बीच पश्चिममा अवस्थित छन्। यी सबै साइटहरू कोइला भण्डारले भरिएका छन्।
त्यहाँ कोइला निकाल्ने विधि छ यसले अपलाचियन माउन्टेनको शिखर माथि खतरनाक छ। र त्यहाँ कोइला खानीमा पहाडको माथिबाट उन्मूलन गर्ने एक विधि छ जुन पहाड क्षेत्रको ठूला क्षेत्रहरू र महत्त्वपूर्ण इकोसिस्टमहरूको विनाश गर्दैछ। यो विधिले के गर्छ खानीको जोखिम कम गर्न र मजदुरहरूको अवस्था सुधार गर्न उच्च कार्बन सामग्रीसहित त्यो पर्वतको टुप्पोलाई हटाउँदछ।
यी कोइला भण्डारहरूको खोजी १ 1859 XNUMX in मा भएको थियो र यो पछि आधुनिक उद्योग बेच्न र यी स्थानहरूमा पुग्नको लागि शुरू भयो। वाणिज्यिक प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रहरू पनि हालसालै पत्ता लगाइएको छ, त्यसैले तेल उद्योगले आफ्नो आँखा अपलाचियामा फर्काएको छ।
सत्य यो हो कि यो दुःखको कुरा हो कि यस ठाउँको लागि यति प्राकृतिक र ऐतिहासिक मूल्यको साइटले मानव हातले क्षति पुर्‍यायो। तपाईंले सोच्नु पर्दछ कि यस प्रकारको हिमाली दायरामा पृथ्वीको अध्ययनको एक महत्त्वपूर्ण अंश छ।
500०० भन्दा बढी भग्नावशेष पहाडहरू उत्खननको लागि लिन सकिन्छ र कोइलाको पूर्ण शोषण गर्दछ। यी कार्यहरूले मूल परिदृश्यलाई अप्राप्न योग्य बनाउँदैछ। यी क्षेत्रहरूमा भइरहेको विशाल संख्यामा विध्वंसहरूले नदी र हिमाली उपत्यकामा पशु विविधतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने आयोन र भारी धातुजस्ता विषाक्त तत्वहरूको ठूलो मात्रामा विमोचन गरेको छ।
भूविज्ञान, वनस्पति र जीव जन्तु
अपलाचियन पर्वतहरू दुई भागमा विभाजित छन्: दक्षिणी र उत्तरी अपलाचियन्स। प्रत्येक मा एक फरक जलवायु र भौगोलिक प्रक्रियाहरु प्रबल। पहिलोमा, कम उचाई भएको बग्ने नदीहरूको ठूलो संख्या छ जुन अटलान्टिक महासागरमा बग्छ र असंख्य खोला बनाउँछ। मौसम समुद्री तट र आर्द्रताको विशिष्ट छ। त्यहाँ इरोसनका तीन प्रकार छन्: हावा, हिमनदी र नदी।
अर्कोतर्फ, हामीसँग उत्तरी अपलाचियनहरू छन् जसमा हामी पनि छौं त्यहाँ फ्लोभियल, हिमनदी र वायुको क्षरण छ, जबकि जलवायु चिसो र हिमाली छ।
अपलाचियन माउन्टेनमा फेला परेका नदीहरूका विशेष विशेषताहरू छन्। र यो यो हो कि तिनीहरू ठूलो गतिमा बग्दछन् र सुन्दर झरनाहरू उत्पादन गर्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तिनीहरू हडसन, डेलावेयर र पोटोमाक हुन्। यी नदीहरू धेरै लामो छैनन् तर तिनीहरूको ठूलो प्रवाह छ जसले झरनाहरूको गठनलाई जन्म दिन्छ। त्यहाँ केन्द्रीय मैदान छ जहाँ धेरै नदीहरूले योगदान पुर्‍याउँछन् र यसको गहिरो उपत्यका पनि छन् जुन घाटीहरू जस्तो देखिन्छ। हामी टेनेसी र ओहायो भेट्छौं। यी दुई सहायक नदी मिसिसिपीको लागि महत्वपूर्ण नदी योगदान हो। थप रूपमा, यसको पानी उच्च गुणस्तरको छ र यस क्षेत्रका सबै ठाउँहरू उर्वर गर्न सक्षम छ।
वनस्पतिको सन्दर्भमा हामीसँग रूखहरू छन् जस्तै फर, बीच, बिर्च, सिप्रस, देवदार, लार्च, रेडवुड, सेतो र पहेंलो पाइन, ओक, चेस्टनट, खरानी, ​​मेपल, एल्म, चिनार, लिन्डेन, आदि। उत्तरी अपलाचियन क्षेत्रमा त्यहाँ विभिन्न व्यापक प्रजातिहरू छन् जुन ह्याच्रीहरूमा विकास हुन्छ ती स्यालहरू, मार्टेन र मिन्क हुन्। उत्तरमा एल्क, रेन्डेयर, एल्क, भालु, एन्टेलोप, लिन्क्स, ब्वाँसो, आदि जस्ता प्रजातिहरूको प्रशस्तता छ।
जे होस् अप्पालाचियन पर्वतहरू पूर्ण रूपले प्राकृतिक स्मारक हो, तिनीहरू केही उत्तम स्थानहरूको लागि बाहिर खडा हुन्छन्। पहिलो हो Appalachian संग्रहालय। यस संग्रहालयमा तपाई हतियार, खेलौना, भाँडा बनाउने, आदि को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसबेला के थियो।
त्यसपछि हामीसँग अन्य स्थानहरू छन्:
शेकर गाउँ। यो 3000००० हेक्टर जमिनको क्षेत्र हो र संग्रहालय, होटलहरू बस्नका लागि, पिकनिक क्षेत्रहरू र पसलहरू समावेश गर्दछ।
Luay Caverns। यी सुन्दर क्याल्साइट संरचनाहरू छन् जसमा पोखरीहरू पनि गुफा भित्र राखिएको छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, अपलाचियन पर्वतहरू हेर्न लायकको प्राकृतिक आश्चर्य हो। के तपाईं कहिले भएको वा जान चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » अपलाचियन पर्वतहरू
पृथ्वी आन्दोलनहरु: रोटेशन, अनुवाद, precession र पोषण